सुतेको बेला घुर्नु हुन्छ ?, त्यो रोग हो, बेलैमा उपचार गर्नुस् Gorkha Samachar
२१ भाद्र २०७६, शनिबार , प्रकाशीत
डा योगेश न्यौपाने (नाक, कान, घाँटी तथा घुर्ने रोग विशेषज्ञ)
‘तपाई घुर्नुहुन्छ, यो रोग हो, यसले तपाईंलाई समस्या गर्छ’ भन्यो भने धेरै बिरामीले पत्याउँदैनन्। किनकी यसले सुतिरहेको बेलामा मात्रै समस्या पार्छ। सुतेको बेलामा श्वास फेर्ने बाटो साँघुरिन्छ। साँघुरिएको बाटोबाट थोरै अक्सिजनमात्रै जान्छ। यसले गर्दा फोक्सोले थोरै अक्सिजन पाउँछ। यस्तो भयो भने फोक्सोबाट रगत हुँदै शरीरका हरेक अंगमा पुग्ने अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ। सुतिरहेको बेलामा हरेक रात बिरामीलाई अक्सिजन कम भइरहेको हुन्छ। जसले गर्दा बिरामीलाई विभिन्न अरू समस्या देखिन्छन्।
यसको उपचार गराउनुभन्दा पहिला घुराइले शरीरमा कति असर गरेको छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसको लागि बिरामीको सुताइको अध्ययन गरिन्छ। यो अस्पतालमा रातभरि सुतेर पनि गर्न सकिन्छ भने घरमा मेसिन जडान गरेर गर्न सकिन्छ। यो परीक्षणले सामान्य घुराइ हो कि यसले शरीरमा असर नै गरिरहेको छ भन्ने टुंगो लाग्छ। मुटुको चालमा गडबडी गरिरहेको छ कि छैन ? जिउमा राति सुतेको बेला अक्सिजनको मात्रा कति छ ? राम्रोसँग गहिरो निद्रा परेको छ कि छैन भन्नेलगायतका अध्ययन गरिन्छ।
सुताइको अध्ययन गरेपछि पनि समस्या छ भने त्यसको केही परीक्षण गरिन्छ। इन्डोस्कोपी गरेर सुत्ने समस्याको अध्ययन गर्नुपर्छ। सुताइको अध्ययन गर्दा बिरामीमा कुनै समस्या देखियो र बिरामीले उपचार गर्न चाह्यो भने ‘स्लिप इन्डोस्कोपी’ गरिन्छ। अपरेशन कक्षमा लगेर बिरामीलाई घुराइन्छ। नाकबाट इन्डोस्कोपी पाइप छिराएर हेरिन्छ। इन्डोस्कोपीले शरीरको कुन भागका कारण समस्या परेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि उपचारको विकल्पबारे छलफल गर्छौं। उपचारको ३/४ किसिमका पद्धति छन्।